विष्फोट श्रृंखलाः के सरकारमाथि नै शंका गर्नुपर्ने हो ? - Nepali Online News Media-shikharnews.com - shikharnews.com
विष्फोट श्रृंखलाः के सरकारमाथि नै शंका गर्नुपर्ने हो ?
२०७४ मंसिर १९ मंगलवार
निर्वाचन नजिकिदै गर्दा भइरहेको बम विस्फोटले मतदातामा भय सिर्जना गरेका बेला गृह मन्त्रालयले ‘विष्फोट विप्लब समूहले गराएको हो नभन्नू, सकेसम्म यसबारे धेरै नबोल्नू’ भन्ने सर्कुलर किन गर्‍यो ?
चन्द्रपुर–५ रौतहटमा २ मंसीरमा भएको बम आक्रमणमा घाइते ७ वर्षीय जैविक राई ।
२१ मंसीरमा हुने दोस्रो तथा अन्तिम चरणको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको प्रचार प्रसार गर्ने अन्तिम दिन राजधानीमा भएको बम विष्फोटमा नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापासहित ११ जना घाइते भएका छन् । थापा काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ४ का प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार हुन् । बम विष्फोट उनकै निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाको चपलीमा घरदैलोका क्रममा भएको थियो ।
बम कसले विष्फोट गरायो भन्नेबारे प्रहरीले केही बताएको छैन । ‘रिमोट कन्ट्रोलबाट विष्फोट गराएको हुनसक्ने’ बताएको प्रहरीले विष्फोटमा संलग्न भएको आशंकामा २२ जनालाई पक्राउ गरेको छ ।
गृह मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गरेर सुरक्षा रणनीति फेरबदल गरिएको र अब विष्फोटका घटना रोकिने दाबी गरेको ४८ घण्टा नबित्दै राजधानीभित्रै यो घटना भएको हो । गृह सचिब मोहनकृष्ण सापकोटा लगायतका अधिकारीहरुले पहिलो चरणको निर्वाचन सुरक्षाको अनुभवका आधारमा सुरक्षा रणनीति परिवर्तन गरिएको र नयाँ सुरक्षा रणनीति लागु भइसकेकाले निर्वाचन बिथोल्ने उद्धेश्यले भइरहेका बम विष्फोट लगायतका घटना रोकिने जिकिर गरेका थिए ।
१२ मंसीरमा दाङको तुलसीपुरमा भएको बम आक्रमणमा घाइते भएका म्यादी प्रहरी विनोद चौधरी । भोलिपल्ट उनको उपचारका क्रममा निधन भएको थियो । तस्वीरः अनलाइनखबर डटकम
गृह मन्त्रालयद्धारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनको दृष्य आफैमा उदेकलाग्दो थियो । किनभने, बम विष्फोटबाट पुरै देश आक्रान्त भइरहँदा, उम्मेदवार र मतदातालाई लक्षित आक्रमण तीब्र हुँदा र सुरक्षा संयन्त्रहरु समेत त्यसलाई रोक्न असफल बनिरहँदा निर्वाचनको समग्र सुरक्षा व्यवस्थामाथि प्रश्न उठेको थियो ।
उम्मेदवारदेखि मतदातासम्म व्याप्त त्रास हटाउन गृहमन्त्री स्वयम् पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित हुनुपथ्र्यो । बिडम्बना, यसबेला देशमा गृहमन्त्री छैनन् । गृहमन्त्रीको कार्यभार आफूमै राखेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पार्टी सभापतिको हैसियतमा चुनावी प्रचारमा व्यस्त छन् । त्यहीकारण गृह मन्त्रालयको पत्रकार सम्मेलन औपचारिकता पुरा गर्ने कर्मकाण्ड जस्तो मात्र थियो ।
त्यसको प्रमाण होे– गृह सचिब लगायतका अधिकारीहरुले वम विष्फोटको श्रृंखला कसले चलाइरहेको छ र त्यसका पछाडि कसको हात छ भन्नेबारे मुख खोल्न समेत नचाहनु । ‘अनुसन्धान भइरहेको’ भन्ने बनिबनाऊ जस्तो जवाफ बाहेक उनीहरु यसबारे बोल्न चाहेनन् । प्रहरीले वम विष्फोटमा नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी’को संलग्नता रहेको भन्दै उसका कार्यकर्ता पक्राउ गरिरहेका बेला गृह मन्त्रालय त्यसबारे किन ‘अनभिज्ञ’ देखियो ?
१३ मंसीरमा उदयपुरको गढी गाउँपालिकामा बम आक्रमणमा परी घाइते भएका उदयपुर क्षेत्र नं २ का कांग्रेस उम्मेदवार नारायण कार्की उपचारको क्रममा शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा । तस्वीरः नेपाली कांग्रेस
प्रहरीले आठ सय भन्दा बढी संदिग्ध व्यक्तिहरुलाई पक्राउ गरेको, त्यसमध्ये दुइसय भन्दा बढी व्यक्ति विष्फोटक सामग्री र हतियारसहित पक्राउ परेको तथा उनीहरुमध्ये अधिकांश विप्लब समुहका कार्यकर्ता भएको बताएको थियो । गृह मन्त्रालयले यसभन्दा के चाहिँ फरक विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको छ ?
यी प्रश्नभन्दा डरलाग्दो अर्को कुरा छ । राजनीतिक नेतृत्वविहीन रहेको गृह मन्त्रालयबाट अहिले देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडिओ) हरुलाई एउटा ‘सर्कूलर’ पुगेको छ । हामीले केही जिल्लाका सिडिओहरुबाट प्राप्त गरेको जानकारी अनुसार अनौपचारिक रुपमा पठाइएको त्यो ‘सर्कूलर’मा गृहबाट ‘विष्फोट विप्लब समूहले गराएको हो नभन्नू, सकेसम्म यसबारे धेरै नबोल्नू’ भनिएको छ ।
प्रहरीले विष्फोटका घटनाहरुबारे बोल्दै आए पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले मुख नखोल्नुमा गृहको यही निर्देशनले काम गरेको देखिन्छ । निर्वाचनको मुखमा तीब्र बनेको विष्फोट श्रृंखलाले मतदातामा भयको वातावरण बनेका बेला गृह मन्त्रालयले यस्तो निर्देशन किन दियो ?
निर्वाचन लक्षित विष्फोटबाट एक जनाको ज्यान गएको छ । कैयौं उम्मेदवारमाथि ज्यान लिने गरी हमला भएको छ । धन्न, उनीहरु त्यसबाट जोगिएका छन् । विष्फोटमा घाइते हुने दलका कार्यकर्ता, समर्थक र सर्वसाधारणको संख्या ठूलो छ । कैयौं व्यक्ति अंगभंग भएका छन् । हिमाल, पहाड र मधेश सबैतिर विष्फोट श्रृंखलाले त्रास बढाएको छ ।
१ मंसीरमा नुवाकोट क्षेत्र नम्बर १ का कांग्रेस उम्मेदवार डा. रामशरण महतलाई लक्षित गरी विष्फोट गराइएको बमले पुर्‍याएको क्षति । तस्वीरः अनलाइनखबर डटकम
निर्वाचन सुरक्षामा प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना सहित म्यादी प्रहरी खटाइएको छ । करिब दुई लाख सुरक्षाकर्मी परिचालित हुँदा पनि यो श्रृंखला घट्नु साटो बढीरहेको छ । किनभने, सुरक्षा संयन्त्रले यो अबस्थालाई ‘ट्याकल’ गर्ने स्पष्ट निर्देशन पाएका छैनन् । आफै अग्रसर भएर ‘एक्सन’मा जाँदा आफै शिकार हुने भय सुरक्षा अधिकारीहरुमा छ ।
सरकार स्वयम्का निर्णयले यस्तो मनोविज्ञान निर्माणमा सघाएका छन् । जस्तो– नुवाकोटमा कांग्रेस नेता एवम् प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार डा. रामशरण महत चढेको गाडीलाइ लक्षित गरी वम विष्फोट गराइएकै दिन त्यहाँका सिडिओलाई हटाइयो । उदयपुरमा कांग्रेसबाटै प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार रहेका नारायण कार्की चढेको गाडीमा विष्फोट गराइएपछि सोही दिन सिडिओलाई त्यहाँबाट सरुवा गरियो ।
यी विष्फोटमा सिडिओको गम्भीर कमजोरी देखिएको भए उनीहरुलाई सरुवा होइन, कारबाही हुनुपथ्र्यो । तर, सरुवामा परेका कसैमाथि कारबाही भएन । “कुनै घटना भयो भने त्यहाँका सुरक्षा अधिकारीलाई त्यसको जरो पत्ता लगाउन दिनुपर्छ” पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक हेमन्त मल्ल ठकुरी भन्छन्, “बीचमै हटाइदिने हो भने या त उनीहरुले कुनै काम गर्नै सक्दैनन्, या आक्रामक भएर अनियन्त्रित बल प्रयोग गर्ने खतरा हुन्छ ।”
आज, १८ मंसीरमा काठमाडौंको चपलीमा बम आक्रमणमा परी घाइते कांग्रेस नेता गगन थापा । तस्वीरः सुवास अधिकारीको ट्विट
बम विष्फोटको श्रृंखला चलिरहेका बेला गृह मन्त्रालयले कैयौं जिल्लामा सिडिओ र जिल्ला प्रहरी प्रमुख फेरबदल गर्ने काम गर्‍यो । जिल्लाको बस्तुस्थिति बुझेका सुरक्षा अधिकारीहरुलाई एकाएक हटाएर त्यहाँको वस्तुस्थिति नै नबुझेका नयाँ व्यक्तिलाई खटाउने काम सरकारले किन गर्‍यो ? अहिले नाजुक बनेको सुरक्षा अबस्था यसको परिणाम हो कि होइन ?
बम विष्फोटका घटना हुनथालेको करिब एक महिना भयो । यो एक महिनामा सुरक्षा निकायहरुको ‘ब्रिफिङ’ सुन्ने र सुरक्षामा देखापरेको चुनौतीलाई ट्याकल गर्ने गरी उनीहरुलाई स्पष्ट निर्देशन दिने काम गृहमन्त्रीको समेत जिम्मेवारीमा रहेका प्रधानमन्त्रीले गरेको जानकारीमा छैन ।
राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद जस्ता संयन्त्र यस्तै कामका लागि बनेका हुन् । प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने परिषदको बैठक बसेर यो अबस्थालाई ट्याकल गर्ने स्पष्ट खाका तय गर्न सक्थ्यो । तर, सुरक्षा परिषदको बैठक बस्ने कुनै पहल नै गरिएन । अरु त अरु, केन्द्रिय सुरक्षा समितिको बैठक बसेको समेत जानकारीमा छैन । यस्तो बेला सुरक्षा निकायको ब्रिफिङ सुन्ने र उनीहरुलाई स्पष्ट निर्देश गर्ने पहल प्रधानमन्त्रीले किन गरेनन् ? सुरक्षा परिषदको बैठक बोलाउने जाँगर उनमा किन देखिएन ?
यी र यस्ता कैयौं प्रश्न छन्, जसले अहिलेको विष्फोट श्रृंखलामा सरकारको भूमिका नै सन्देहपूर्ण देखाउँछन् । मतदाता, उम्मेदवारदेखि आम जनजीवन सुरक्षित रहेको आश्वासन दिन समेत सरकार अनिच्छुक देखिन्छ । वम विष्फोटका पछाडि जुनसुकै समूहको हात होस्, उनीहरुको उद्धेश्य जसरी पनि निर्वाचन बिथोल्ने र संविधानसभाबाट जारी संविधान सफल हुन नदिने देखिन्छ । सरकारको यस्तो रवैयाले तिनलाई नै सघाउ पुर्‍याइरहेको छ ।
बम पड्किइरहेको छ, तर प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादव निर्वाचन सुरक्षामा ढुक्क छु भनिरहेका छन् । निर्वाचन सुरक्षा प्रभावकारी बनाउन र मतदातामा भयरहित वातावरण निर्माण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने आयोगका प्रमुखको भूमिका पनि उत्तिकै सन्देहपूर्ण देखिन्छ ।
सुरक्षा भनेको मनोविज्ञान हो । यो हरेकले अनुभूति गर्ने कुरा हो । वम विष्फोटको श्रृंखलाले मतदातामा असुरक्षाको मनोविज्ञान बढेको छ । सुरक्षित वातावरणमा मताधिकार प्रयोगको सुनिश्चितता गर्छौं भन्ने आश्वासन दिन समेत सरकार असफल देखिन्छ ।
पहिलो चरणको निर्वाचनमा अपेक्षाकृत न्युन मतदान हुनुमा हिमाली जिल्लामा बढ्दो चिसोलाई कारण मानिएको थियो । दोस्रो चरणमा भने यही त्रासको वातावरणले न्यून मतदान हुन सक्छ । मतदाताले सुरक्षित र भयरहित वातावरणमा मतदान गर्न पाउने अबस्था नहुनु लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको बिडम्बना हो । भयको यो वातावरण अविलम्ब अन्त्य नगरिए त्रासकै बीच निर्वाचन त होला, तर त्यसले दिने नतीजा र भोलिका दिनमा बढ्ने हिंसाको जोखिम अकल्पनीय हुनेछ ।
रामेश्वर बोहराले हिमालखबर मा गरेको टिप्पणी !
अालेख: कामरेड ! दशैंको शुभकामना दिँउ वा श्राप ?